Ibrahimovic: Ingiriiska ayaa la iga jecelyahay - BBC News Somali
Ibrahimovic: Ingiriiska ayaa la iga jecelyahay
Weeraryahanka reer Sweden, Zlatan Ibrahimovic, ayaa sheegay in kooxo ka dheela horyaalka Ingiriiska ay xiisaynayaan in ay kala soo wareegaan kooxda Paris St-Germain, ee haysata horyaalka Faransiiska.
34 jirkan oo qandaraasku ka dhamaanayo xagaagan ayaa lala xiriiriyay Manchester United, Chelsea iyo Arsenal.
Isaga oo arrintaas ka sii hadlaya ayuu sheegay in la danaynayo uuna arki doono meesha ay ku dambayso. Balse wuxuu sheegay in loo baahanyahay in ay noqoto sida guurka oo kale oo labada dhinacba ay rabitaan muujiyaan.
Ibrahimovic wuxuu ku guulaystay horyaalada afar dal oo Yurub ku yaala.
Kooxda Ajex ayuu ka caawiyay in ay ku guulaystaan labo horyaal oo dalka Netherlands ah, kaddibna Juventus ayuu ka caawiyay labo horyaal inkasta oo markii dambe lagala noqday kaddib markii ay fadeexad dhacday.
Saddex koob oo kale oo Serie A ah ayuuse la qaaday kooxda Talyaaniga ka dhisan ee Milan.
Kaddib wuxuu u wareegay Spain wuxuuna koobka La Liga, kula guulaystay Barcelona, kahor inta uusan ku laabanin talyaaniga xilli ciyaareedkii sanadkii 2010-11 markaas oo uu AC Milan, kula guulaystay Serie A, koobkii sideedaad oo xiriir ah oo uu gacan ka gaysto ayuuna kaasi noqday.
Sanadkii 2011-12 ayuuse koob la’aan noqday wuxuuna u wareegay kooxda PSG, afartii sano ee u dambaysayna iyaga ayaa hantay horyaalnimada Faransiiska.